အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုနှင့်သဒ္ဒါကိုလေ့လာပါ - ESL အွန်လိုင်း | USAHello
ESL အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့် app များကိုအတူအင်္ဂလိပ် Learn
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအိမ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူချင်ပါနဲ့? ဤအဖြစ်သည် ESL အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူအင်္ဂလိပ် Learn. ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုအကောင်းဆုံးအချို့လည်းပါဝင်သည်, ကျွန်တော်တွေ့ပြီအခမဲ့ ESL အွန်လိုင်းအစီအစဉ်များ. သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း device ပေါ်ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အချို့ကောင်းသော apps များလည်းရှိပါတယ်.
Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.
Best websites for ESL online
သငျသညျသစ်ကိုနားထောင်ကျွမ်းကျင်မှုရဖို့ကူညီပေးဖို့က Short သင်တန်းများနှင့်ဗီဒီယိုများကို.
Breaking News, အင်္ဂလိပ်
လက်ရှိဖြစ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီး ESL ပီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆငျ့အတှကျနားထောင်ခြင်းနှင့်သင်ထောက်ကူ.
ကမ္ဘာ့အကျယ်ဘာသာစကားသင်ယူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ interactive သင်တန်းများ.
နားထောင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူကူညီပေးသည်. သငျသညျအားကစားကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးအကြောင်းအရာများရှေးခယျြနိုငျ, သမိုင်း, သို့မဟုတ်ခရီးသွား.
ဒီ website သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်လေ့ကျင့်ဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်သင်ထောက်ကူနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိရှိပါတယ်.
ဒီ website အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကမ်းလှမ်း, ကွဲပြားခြားနားသောသဒ္ဒါအကြောင်းအရာများ၏လေ့ကျင့်ခန်း၏စာရေးနှင့်အတူ
အတော်များများကကွဲပြားခြားနားသောအခမဲ့အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ (ထိုကဲ့သို့သော TOEFL အဖြစ်) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကြောငျးအတှကျစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်အဘို့အသငျသညျပွငျဆငျခွငျးကိုကူညီ.
အများကြီးကွဲပြားခြားနားသော ESL အရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်, ကျော်အပါအဝင် 2000 သငျသညျကွညျ့ရှုနိုငျအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုမှုဗီဒီယိုများ.
GlobalEnglish သငျသညျအလုပျမှာအသုံးပွုနိုငျသောသင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကူညီရန်အွန်လိုင်းသင်တန်းများရှိပါတယ်. အခမဲ့သင်တန်းတွေတက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန် info@usahello.org ရန်သင့်အမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို Send.
GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.
လူရဲ့အမှားကိုအလျောက်သောက်ဘ်ဆိုက်, apps များနှင့်အတူသင့်ရဲ့အရေးအသားကိုစစ်ဆေးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. သဒ္ဒါနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းလင်းချက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သူတို့ရဲ့ website တွင်တစ်ဦးလက်စွဲစာအုပ်လည်းရှိပါသည်, ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်များနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများ.
Purdue ESL Lab က
, Grammar နှင့်အင်္ဂလိပ်သိကောင်းစရာများ.
VOA News Poster: အထူးအင်္ဂလိပ်စာ
သင့်ရဲ့ comprehension ကျွမ်းကျင်မှုကိုစစ်ဆေးနှေးကွေးအင်္ဂလိပ်လိုသတင်းကိုနားထောင်.
ESL အွန်လိုင်းအကောင်းဆုံး apps များ
Best apps for ESL online
သငျသညျအသံထွက်ဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပြောသောအခါ Duolingo မှတ်တမ်းတင်.
ဒီ app ကိုသင်အမှန်တကယ်ဇာတိစပီကာကနေလေ့လာသင်ယူကူညီရန်အစစ်အမှန်ဗီဒီယိုများကိုအသုံးပြုသည်. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ဒီ app ကလေးတွေအသက်အရွယ်အဘို့ဖြစ်၏ 2-8. သူတို့ကဂိမ်းမှတဆင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, သီခငျြးမြား, နှင့်ပဟေဠိ. သငျသညျအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်လိုပါလျှင်, info@usahello.org မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့.
This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.
သငျသညျအရေးအသားလေ့ကျင့်လိုပါသလားနှင့်အင်္ဂလိပ်လေ့လာနေ? ကျနော်တို့အခမဲ့အွန်လိုင်း GED ပူဇော်® နှင့်နိုင်ငံသားအတန်း.
Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.
အဆိုပါအတန်း GED အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြပေမယ့်® နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်, သင်သည်လည်းသင်၏ဘာသာစကားအတွက်အတန်းကြည့်ရှုနေစဉ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုငျသောကွောငျ့သင်အွန်လိုင်း ESL သင်ယူကူညီဖို့ရန်အလွန်ကောင်းသောအတန်းများမှာ. ဒါဟာသင်ပိုမြန်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူကူညီပေးသည်. ယခုစာသင်ခန်းကိုသွားပါ.
Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.
အဘယ်အရာကို USAHello စာသင်ခန်းများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်?
Florence Phillips က’ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်အောင်မြင်ဖို့ကူညီ
What is USAHello classroom and why is it free?
Tips for English conversation